विदेशको कमाई छाडेर संयुक्त कृषि पेशामा जम्दैछन चितवनका ३ युवा (फोटो फिचर सहित) – kalikadainik.com
विदेशको कमाई छाडेर संयुक्त कृषि पेशामा जम्दैछन चितवनका ३ युवा (फोटो फिचर सहित)
बिहिबार, माघ ०२, २०७६ | १६:४९:४० |
शिशिर सिंखडा, चितवन । विदेशको कमाई छाडेर नेपाल फर्किएका ३ जना युवाहरुले संयुक्त रुपमा कृषि पेशा गर्न थालेका छन् । कालिका नगरपालिका वडा नं. ६ प्रगति टोलका युवाहरुले संयुक्त रुपमा कृषि पेशा अंगालेका हुन् । उनीहरुले एक बिगाहा जमिनमा गोलभेडा खेती लगाएका छन् भने त्यसका अतिरिक्त केरा खेती र मौरीपालन समेत गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय ३० वर्षीय अमृत अमगाई, ३३ वर्षीय वासुदेव घिमिरे र ३४ वर्षीय कृष्ण अमगाईले संयुक्त रुपमा गोलभेडा खेती गरेका हुन् । ८ वर्ष कतारमा कुक काम गरेका अमृतको कमाई मासिक नेपाली ८४ हजार ५ सय रुपैया थियो । विदेशी भूमिमा जति दुःख गरेपनि आत्मसन्तुष्टि नभएकोले साथीहरु मिलेर नेपालमै तरकारी खेती थालेको उनले बताए ।
उनी अहिले आफ्नो अपुरो रहेको पढाईलाई समेत निरन्तरता दिएका छन् । उनी बीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा बी.ए. तेश्रो वर्षमा समेत अध्ययन गर्दैछन् । तरकारीको अतिरिक्त उनले ८ बिगाहा जमिनमा केरा खेती गर्दै आएका छन् भने ८० घार मौरी पनि पालेको उनले बताए ।
उनी जस्तै विदेशी भूमि मलेसिया, कतार र साउदीमा ९ वर्ष बिताएका वासुदेव घिमिरेको कमाई पनि विदेशी भूमिमा नेपाली १ लाख ५ हजार रुपैया थियो । ड्राइभर पेशमा रहेका उनी अर्काको जागिर भन्दा स्वदेशमा केही गर्न कृषि पेशा थालेको बताउछन् । विदेशमा गरेको कमाईले आर्थिक रुपमा सन्तुष्ट नै भएपनि आफ्नै माटोमा मिहेनत गर्न नेपाल फर्किएको उनको भनाइ थियो । तरकारी खेतीका अतिरिक्त उनले भरतपुरको लंकुमा दुध डेरी समेत खोलेका छन् । आफूले पालेको २ वटा गाईको दुध र गाउँघरबाट किनेर उनले दैनिक रुपमा १ सय ५० लिटर भन्दा बढी दुध विक्री गर्ने गरेका छन् ।
जीवनको उर्वर समयको १६ वर्ष भारतमा सेक्युरिटी गार्डको काममा बिताएका कृष्ण अमगाईको मासिक तलव १६ हजार रुपैया थियो । भारतीय जागिरले घरखर्च चलाउँदै आएका अमगाईले साथीहरुसँग संयुक्त रुपमा गरेको तरकारी खेतीको अतिरिक्त १ बिगाहा जमिनमा केरा खेती पनि गर्दै आएका छन् । विदेशको जागिर भन्दा आफ्नै माटोमा गरेको मिहेनत र त्यसबाट हुने प्रतिफल मिठो हुने भएकोले कृषि पेशा थालेको उनले सुनाए ।
विदेशबाट फर्किएर कृषि पेशा अंगालेका उनीहरुले हालसम्म गोलभेडा खेतीको लागि ५ लाख रुपैया खर्च गरिसकेका छन् । हाल गोलभेडाको उत्पादन भई विक्री सुरु भएको र आम्दानी समेत सन्तोषजनक भएको उनीहरुले बताए । गोलभेडाको अतिरिक्त सोही जमिनलाई उनीहरुले खाली हुन दिएका छैनन् । उनीहरुले गाजर,मुला,लौका लगायतका तरकारीहरु लगाएर पनि थप आम्दानी समेत गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सफल केरा किसान पदम प्रसाद अमगाईले उनीहरुलाई तरकारी खेतीको लागि प्रोत्साहन गरेका थिए । उनीहरुले सो गोलभेडा ४ महिनामा करिव २० लाख रुपैयाको विक्री गर्ने बताएका छन् । अन्य तरकारीहरु पनि करिव ५ लाख रुपैयाको विक्री गर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।